Ihe omuma: 10 Ihe Nlekọta Ihe Nlekọta Uche Akpadoro Iji Wepu Data Onyonyo
Ọ bụrụ na ịchọrọ wepụ data sitere na saịtị dị iche iche ị họọrọ ma nwee ngwa oru nyocha ngwa ngwa ime, ihe ndi a ihe ntanetiri ga - enyere aka wepu data onyonyo n'enweghi nsogbu obula. Ha dị mfe iji na-abịa na nhọrọ na ihe ndị ka mma karịa mmemme ndị yiri ya. Ezubere ngwaọrụ ndị a iji wepu ozi bara uru n'otu ntabi anya, ichekwa oge na ike nke ndị ọrụ.
Ka anyị kwuo ebe a na ụfọdụ n'ime mmemme ndị a enweghị ego ma ndị ọzọ na-abata na nsụgharị ndị a na-akwụghị ụgwọ na nke a na-akwụghị ụgwọ. Ị ga-enwerịrị atụmatụ ahụ ga-emecha tupu oge ikpe ahụ agafe:
Import.io mara maka njedebe ya na nkà na ụzụ dị elu ma dị oke mma mmemme maka ndị mmepe weebụ na ndị ọkachamara ọkachamara. Ọ nwere ike inye aka ịnweta data sitere na ibe weebụ ma wepụta ya na CSV faịlụ n'ime nkeji. Ọtụtụ narị puku ebe nrụọrụ weebụ nwere ike kpochapụ na-edeghị ederede koodu ọ bụla, na Import.io ga-ewetakwa 1000 API maka gị dịka ọ bụla ị chọrọ.
Dexi.io, nke a na - akpọ CloudScrape, ga - enyere gị aka inweta data ziri ezi ma hazie na sekọnd ole na ole. Ịkwesighi ibudata usoro a dị ka Dexi.io bụ onye nchịkọta akụkọ na nchịkọta weebụ nke na-abụghị naanị na-enyocha saịtị gị kamakwa ọ na-agba ma ọ bụ na-akọwa ya n'ụzọ dị mma. Ọ na-anakọta ma na-azọpụta data ma na Box.net na ụgbọala Google ma na-ebute ya na JSON na CSV.
Webhouse..Ee bụ ihe nchọgharị weebụ na ihe nchọgharị nke ọzọ na-agba ma wepu weebụsaịtị gị na otu API. Ọ nwere ike wepu data na ihe karịrị narị asụsụ abụọ na iri anọ ma kwado usoro dịka RSS, XML, na JSON.
Scrapinghub bụ usoro ihe ntanetị weebụ na ihe nchịkọta data. Ọ na-eji ezigbo proxy rotation, dị ka Crawlera. Ịgafe bots ga-enyere gị aka ịdepụta saịtị gị na nchọnchọ ọchụchọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma mee ka ọ ghara ịbanye na bọtịnụ na-emerụ ahụ. Atụmatụ ahụ ga-efu gị ihe dị ka $ 25 kwa ọnwa ka mbipụta ya n'efu na-abịa na ọnụọgụgụ njirimara nke atụmatụ.
5. Anya na-ekiri anya:
Onye na-ahụ ihe nkiri bụ ihe ntanetị nke data weebụ nke nwere ike ịhazi ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ maka ndị ọrụ, a na-ebute ihe ndị a n'ime otu elekere abụọ. Ị nwere ike nweta data gị n'ọdịnihu n'ụdị XML, JSON, CSV, na SQL.
Outwit Hub bụ ihe mgbakwunye Firefox bara uru ma dị ịtụnanya nke na-eme ka nchọpụta weebụ anyị dị mfe site na njirimara ihe ntanetị dị egwu na nke a na-amaghị. Ị nwere ike ịgagharị na ibe weebụ na-akpaghị aka na-enwe ike inweta data achọrọ na ọtụtụ usoro.
A na - achọpụtachacha ihe nyocha maka njirimara enyi ya ma na-ebuputa data ị nwetara na ederede Google. Ọ bụ usoro n'efu nke enwere ike iji ma mmalite ma ndị ọkachamara. Naanị ị ga-edetuo data ahụ na mpempe akwụkwọ ya ma kpochapụ ya maka gị.
Nke a bụ ihe ntanetị weebụ dị ike ma nwee ike iwepụta data nwere ike ịchọpụta ụdị data gị dabere na ihe ị chọrọ. Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa na fetches data achọrọ na ise na elekere iri. Ugbu a, ụlọ ọrụ dịka PayPal, MailChimp, na ndị ọzọ na-eji ya.
Site na Spinn3r, ọ dị mfe ịbakọta data niile site na saịtị ọkachamara, netwọk mgbasa ozi mmekọrịta, ndepụta RSS, nri ATOM na ntaneti ozi. Ọ na-enye gị nsonaazụ chọrọ ya n'ụdị faịlụ JSON.